सिमाना पारि | NayaBishwo.com
राजीव गान्धी हत्याका अभियुक्तलाइ कैद मिनाह गर्ने
भारत । भारतमा निर्वाचन केन्द्रित प्रतिवद्धता गर्ने क्रम शुरु भएको छ । दक्षिण भारतमा अवस्थित क्षेत्रिय पार्टी द्रविड मुनेत्र कडगम (डिएमके) ले मंगलबार आफ्नो पार्टीको घोषणा पत्र जारी गरेको छ । ठुला पार्टी भाजपा र कांग्रेसले घोषण पत्र जारी गर्ने तयारी गरिरहेका बेला डिएमकेले आफ्नो घोषणा पत्र जारी गरेको छ । चेन्नइमा घोषणा पत्र जारी गर्ने क्रममा राजीव गान्धी हत्याकाण्डका अभियुक्तलाइ कैद मिनाह गर्ने सम्मको प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा गरिएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।सन् १९९१ मा तमिलनाडुको एक चुनावी… पुरा पढौ
जेल जानबाट बचे अनिल अम्बानी
भारत । भारतका चर्चित उद्योगपति मुकेश अम्बानीले भाई अनिलको ऋण तिरिदिएका छन् । अनिल अंबानीको दूरसंचार कम्पनी आरकमले एरिक्सनलाई तिर्न बाँकी रहेको ४ सय ६२ करोड भारतीय रुपैयाँ दाजु मुकेशले तिरिदिएका हुन्। १९ मार्च अर्थात आजसम्मको भाका दिइएको रकम नतिरेको खण्डमा आरकमका अध्यक्ष अनिललाई ३ महिनाको जेल सजाय हुने उच्च अदालतले फैसला गरिदिएको थियो। दाजुले ऋण तिर्न सहयोग गरेपछि दाजु भाइको नातमा प्रगाढता देखिएको छ । संकटको समयमा दाजु मुकेशले भाई अनिल गरेको सहयोगले भारतीय मिडियामा चर्चा पाएको छ । एरिक्सनको… पुरा पढौ
ब्वायफ्रेण्डका आइफोन बेचेर युवतीले किनिन् घर !
काठमाडौं । अहिलेको जमानामा मानिसहरुलाई कोभन्दा को कम भन्ने नशा नै लागेको छ । प्रतिस्पर्धाको यो युगमा अघि बढ्न वा चाहेको कुरा प्राप्त गर्नका लागि कोही मानिसहरुले निकै स्मार्ट तथा इमान्दार बाटो अपनाउँदछन् तर केही मानिसहरु जुनसुकै हदसम्म गिर्न तयार हुन्छन् । चीनमा हालै यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ । जसमा एक युवतीले घर किन्नका लागि एक दुई होइन २० जना ब्वायफ्रेण्ड बनाइन् । एक पछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ केटाहरुसँग प्रेमको नाटक रची सबैसँग आइफोन सेभेन फुत्काउन सफल भइन्… पुरा पढौ
संसारका १० सर्वाधिक धनि व्यक्तिहरु, जस्काे कति छ सम्पत्ति ?
काठमाडौं । एमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। यो सन् २०१९ को फोर्ब्स अर्बपतिको सूचीमा आधारित तथ्य हो। तथ्यांक अनुसार उनको अनुमानित सम्पत्ति १३१ अर्ब डलर बराबर रहेको छ । त्यसैका आधारमा उनी आधुनिक कालका सर्वधिक धनी व्यक्तिका रुपमा चिनिएका छन् । तर उनी संसारमा अहिलेसम्मका सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति भने होइनन्। संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति अहिले पनि १४औँ शताब्दीका पश्चिम अफ्रिकी शासक मान्सा मुसा हुन्। उनले दिएको दानका कारण एउटा पूरै देशको अर्थतन्त्र धर्मराउन पुगेको थियो। मुसाको सम्पत्तिको… पुरा पढौ
भारत । इन्डियन काँग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेको तीन दिनमै भारतमा एक जना नेताको हत्या भएको छ भने उनका छोरा घाइते भएका छन् ।बहुजन समाजवादी पार्टी (बिएसपी)का पूर्व नेता देवेन्द्र चौरसियाको हत्या भएको हो भने उहाँका छोरा सोमेश घाइते हुनु भएको हो ।मध्य प्रदेशको दामोही नजिकै अज्ञात व्यक्तिहरुको आक्रमणमा परी उहाँ शुक्रबार मारिनु भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । घटनामा संलग्न भएको आशंकामा मध्यप्रदेश प्रहरीले सात जनाविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको छ ।मुद्दा दर्ता गरिएकामध्ये एक जना बिएसपीका तर्फबाट विधान सभा सदस्य रहेकी राम… पुरा पढौ
मस्जीदमा गोली चल्दा ४९ जनाको मृत्यु, २० गम्भीर
काठमाडौं । न्यूजील्याण्डको क्रिस्टर्चच शहरको दुई मस्जीदमा गोली चल्दा ४९ जनाको मृत्यु भएको छ भने, २० जना गम्भीर घाइते भएका छन् । न्यूजील्याण्डको प्रधानमन्त्री जेसिन्डा आर्डनले उक्त हमलालाई आंककारीले गरेको बताएका छन् । अज्ञात बन्दुधारीले अन्दाधुन्दा गोली चलाएको न्यूजील्याण्ड प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गोली चलाएको भन्दै ४ जना अधिकारीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार स्थानीय समय १ः४० बजे मस्जीदमा भेला भएर नमाज पढीरहेको अवस्थामा बन्दुकधारी अज्ञात व्यक्तीले गोली चलाएको जनाएको छ । सिएनएन संवाददाता मोहन इब्राहिमका अनुसार बन्दुकधारीले… पुरा पढौ
५ म्याग्नीच्युडको भूकम्प
टोकियो । जापानमा ५.२ म्याग्नीच्युडको भूकम्प गएको छ । मौसम सम्बन्धि निकायका अनुसार जापानको दक्षिणपश्चिम प्रान्त वाकायामानजिकै रहेको किइ पेनिसुलामा स्थानीय समयाअनुसार बुधबार दिउसो १ः५३ बजे सो भूकम्प गएको हो । यस भूकम्पपछि सुनामीको सूचना भने जारी नगरिएको सम्बन्धित अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । वाकायामा प्रान्तको सात ओटा क्षेत्रमा यस भूकम्पको कम्पन बढी महसूस गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । तोकुशिमानजिकै रहेको क्षेत्र बढी प्रभावित भई आएको यस भूकम्पलाई जापानको भूकम्प मापन क्षेत्रले भने ४ म्याग्नीच्युडको मात्र मापन गरेको जानकारी दिएको… पुरा पढौ
अमेरिकी सहरमा कसरी बन्यो बाख्रो मेयर ?
काठमाडौं । अमेरिकाको बरमोन्टस्थिल फेयर हेभन सहरमा एक बाख्रालाई मेयर बनाइएको छ । मेयर चन्नका लागि चुनाव गरिएको थियो । मेयरका लागि कुकुर र विरालोसहित १६ जनावर उम्मेदवार बनाइएका थिए । अन्तिममा तीन वर्षको लिंकन नामको बाख्रा सहरको मेयर बन्यो।लिकंन १३ भोट ल्याएर मेयर बनेको हो।उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सैम्मी नामको कुकुरले १० भोट लिएर हार खानुपर्‍यो।अरु उम्मेदवारहरुले जम्मा ३० भोट मात्र प्राप्त गरे। लिंकनको कार्यकाल १ वर्षको हुनेछ। लिंकनलाई टाउन मिटिङ डेको अवसरमा मेयर बनाइएको हो।लिंकनले मेयरको पदभार पनि सम्हालिसकेको… पुरा पढौ
नेपालको बारेमा भारतीय सांसदले लेखिन् अपमानजनक टिप्पणी
काठमाडौं । भारतीय आम आदमी पार्टीकी सांसद अल्का लाम्बाले नेपालबारे अपमानजनक टिप्पणी गरेकी छिन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलक्षित ट्वीट गर्दै उनले नेपालबारे अपमानजनक ट्वीट गरेकी हुन् । उनले आफ्नो ट्वीटमा लेखेकी छिन् प्रिय भारतवासी, कृपया यसपटक प्रधानमन्त्री चुन्नुहोला । चौकीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सकिन्छ । नेपालका चौकीदार चोर हुँदैनन् । https://twitter.com/LambaAlka/status/1105302471478530048 उनले यस्तो ट्वीट गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । भारतीय काँग्रेसकी नेतृ रहेकी लाम्बाले पार्टी परित्याग गर्दै सन् २०१३ मा आम आदमी पार्टीमा आबद्ध… पुरा पढौ